Under-Display Fingerprints Scanner ဆိုတာ … ? — Anycall Mobile
Under-Display Fingerprints Scanner ဆိုတာ … ?
By Nyein Aung Htet October 23, 20192Mins Read
အခု ခေတ်ပေါ် Android စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ တက်ဘလက် တွေမှာ Unlocking Trend လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ် နိုင်တဲ့ Under-Display Fingerprints Scanner မြန်မာလိုဆိုရရင် “မျက်နှာပြင်အောက်မှ လက်ဗွေ စကင်ဖတ် စစ်ဆေးခြင်း” ဆိုတာတွေ ပါဝင်နေကြတာကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အရင်ကတော့ စမတ်ဖုန်းတွေ တက်ဘလက်တွေကို Unlock လုပ်ဖို့ Pin နံပါတ်တွေ၊ Pattern ပုံစံ အစက်အပျောက်‌လေးတွေ၊ Password စကားဝှက်တွေ ပြီးတော့ Facial Recognition မျက်နှာလော့ဖွင့် စနစ်တွေ Fingerprint Scanner လက်ဗွေ လော့ဖွင့် စနစ်တွေ အသီးသီး ရှိခဲ့ပြီး သူ့တို့ အကြောင်းတွေကိုသိရှိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။
ဒီတော့… “နည်းပညာဆိုတာ မပြီးဆုံးနိုင်သော ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ကစားပွဲ” ဆိုတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ တက်ဘလက်တွေကို Unlock လုပ်ဖို့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းလမ်း အသစ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Under-Display Fingerprints Scanner တွေဆိုတာ ဘာတွေလဲ? ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ?
ဒါလေးတွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ နားလည်လွယ်အောင် ရှင်းပြသွားပေးပါ့မယ်။
Under-Display Fingerprints Scanner ဆိုတာ သူ့ရဲ့ နာမည် Under-Display ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်(Display) အောက်မှာ Fingerprints Scanner တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ( ငိ စတာပါ အတည်ပါ :p )
*Under-Display Fingerprints Scanner တွေဟာ ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်(Display) အောက်ကနေပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်က လက်‌‌ဗွေကို လှမ်းဖတ်(အာရုံခံ)ရတာ ဖြစ်လို့ LCD Display တွေမှာ အလုပ်မလုပ်ဘဲ OLED Display တွေမှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Under-Display Fingerprints Scanner မှာ အခုလောလောဆယ်တော့ Optical နဲ့ Ultrasonic ဆိုပြီး အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ သဘောတရားတွေကို ရှင်းပြရမယ် ဆိုရင်ဖြင့် …
► Optical ဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာလေးမှာ (Display ကနေ) အလင်းရောင် ထိုးပေးပြီး မျက်နှာပြင်(Display) အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ Sensor/Camera နဲ့ လက်ဗွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်သလို ဖမ်းယူလိုက်ပြီးနောက် အဲ့ဒီ အချက်အလက်တွေကို ကိန်းဂဏာန်းတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီဟာတွေဟာ နဂိုကသိမ်းဆည်းထားတာတွေနဲ့ ကိုက်ညီရင်တော့ Unlock လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ သဘောတရားက တော်တော်လေးကို ရိုးရှင်းပါတယ်။ Optical ပါတဲ့ဖုန်း Oneplus 6T,…။(Optical တွေက ရုံးတက်ရုံးဆင်း လက်ဗွေနှိပ်တဲ့ စက်တွေမှာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။)
● Ultrasonic ဟာ Ultrasound ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ နားနဲ့ မကြားနိုင်တဲ့ ကြိမ်နှုန်းမြင့် အသံလှိုင်းတွေ ကို သတ်မှတ်နေရာလေးကနေ လက်ဗွေဆီကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ပြန်ခုန်ထွက်လာတဲ့ အသံလှိုင်း တွေကို 3D Map (သုံးဖက်မြင် မြေပုံ) အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခြားနည်းနဲ့ ပြောရရင်တော့ Ultrasonic ဟာ Optical ထက် ပိုမို အဆင့်မြင့်တဲ့ အသံလှိုင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး လက်ဗွေကို စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါတယ်။ မြင်သာအောင် ပြောရရင် မေမေလောင်းရဲ့ ဗိုက်ထဲက ကလေးလေးလေးကို သားသားလေးလား မီးမီးလေးလား သိရအောင် Ultrasound ရိုက်သလိုမျိုးပေါ့။ Ultrasonic ပါတဲ့ဖုန်း Samsung Galaxy S10
အဲ့ဒိလို ပြုလုပ်ပြီးနောက် ရရှိလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ တိုက်ညီစစ်ဆေးပြီး တူညီရင် Unlock လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Optical နဲ့ Ultrasonic ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ သဘောတရားတွေကို နားလည်လောက်ပြီဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကိုပါ တစ်ခါတည်း ‌ပြောပြလိုက်ပါမယ်…
► Optical ဟာ Ultrasonic ထက် ဈေးနှုန်း သက်သာတဲ့ အပြင် သူက လက်ဗွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်သလို ဖမ်းယူလို့ သူ့ကို High Definition Images လို့ ခေါ်တဲ့ ရုပ်ထွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ (သဘောတရားအရ) လှည့်စားဖို့ (မလွယ်ကူပေမယ့်) ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် Optical ဟာ Ultrasonic လောက် လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိသလို တိကျမှုလည်း နည်းပါးပါတယ်။ ရေစိုနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်း အလုပ်အလုပ်တက်သလိ မှန်မကွဲ Screen Protector တွေနဲ့လည်း အဆင်မပြေတာက များပါတယ်။
● Ultrasonic ဟာ ဈေးနှုန်း မြင့်မားသလို လုံခြုံစိတ်ချရမှု အတော်လေးရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရေစိုနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်း ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သလို မှန်မကွဲ Screen Protector အများစု နဲ့လည်း အဆင်ပြေပြေ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
►● Optical နဲ့ Ultrasonic နှစ်ခုလုံးဟာ နည်းပညာအရ အဆင့် မြင့်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက်လို့ ဆိုနိုင်တာ တစ်ခုကတော့ အခုလက်ရှိ စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ တက်ဘလက် အများစုမှာ ပါဝင်နေတဲ့ *Capacities Fingerprint Scanner တွေလောက် လျှင်မြန်မှု မရှိသေးတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း နည်းပညာတွေဟာ တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးတက်လာနေတာမို့ မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာ တူညီလာနိုင်ပါတယ်။
*Capacitie Fingerprint Scanner = လက်ဗွေရဲ့ ထိပ်က လျှပ်မှုန် (Electric Charge) လေးတွေကို အာရုံခံတိုင်းတာပါတယ်။
#Anycall_Mobile #Under_Display_Fingerprints_Scanner #Knowledge